Torolalana Fibodoana Ny Wall Street: “Fomba Handraketana An-tSarimihetsika Ny Revôlisiona” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2012 18:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Filipino, Português, English
Avy amin'ny Chris Rogy, WITNESS Tools & Tactics
Navoaka manokana tao amin'ny bilaogin'ny WITNESS Ity lahatsoratra ity. Vakio ato izany.
Namoaka lahatsoratra mivelatra ny The New York Times tamin'ny Alahady faha 11-n'ny volana Desambra izay nampisongadina ny anjara asan'ny teknolojia tamin'ny hetsika “Occupy Wall Street”. Mpampita vaovao miisa fito ambin'ny folo ny ampitso, no nosamborina ary tao anatin'izany ny ekipan'ny Global Revolution livestream.
Nanomboka hatreo, noenjehin'ny polisy tao Etazonia ireo mpikambana ao amin'ny haino aman-jery tsy miankina sy ny olo-tsotra mirongo fakantsary sy fanangonam-baovao, mba hampitsaharana fahitana polisy manao herisetra sy hamafàna ny fahazoan'ny hetsika vahana.
Inona no hevitr'izany rehetra izany? Ny mety ho valinteny iray amin'izany ny tanjaky ny olotsotra mampita vaovao ao anatin'ny hetsika. Nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fitsikerana nyherisetran'ny polisy amin'ny vahoaka sy ny fampitana ny fandaharam-potoanan'ny hetsika hatramin'ny fiantombohany tamin'ny 17 Septambra 2011 ny olo-tsotra mampita vaovao. Ny marina, nitovo tsikelikely ny lahatsary sy ny saripika novokarin'olo-tsotra sy ny mpampita mivantana tao amin'ny hetsika Bodoy ny haino aman-jery mahazatra, mampisongadina ny anjara asany matanjaka amin'ny fametrahana ny fandaharam-potoana amin'ny vahoaka.
Karohy ao amin'ny Global Revolution ny fanadihadiana ahy miaraka amin'ny Josh teo aloha momba ny herin'ny fampitana an-tsary mivantana.
Filàna fiofanana maka lahatsary
Ilaina indrindra ny ho tsara ofana sy tsara aro amin'ny fakàna lahatsary mandritra ny fihetseha-panoherana. Hita na aiza na aiza ny fakantsary ary tsy maintsy ananana ny fahaizana mampiasa ny fitaovana entina miara-miasa hiarovana ny fahalalahan'ny vahoaka sy mba hizara hafatra. Fanamby mifandray amin'ity fandraisana an-tanana [fiofanana] ity no miandry ny mpiaro ny zon'olombelona ao Ejipta, Syria ary ny Hetsika Bodoy manerana izao tontolo izao.
Lasa toy izao ny fanontaniana ankehitriny, inona avy ireo tetika sy teknika tsara indrindra tiantsika hozaraina ary ahoana no hisintonantsika ny fifantohan'ny olona hampita ny vaovao?
Ohatra tsy azo ihodivirana ny lahatsary nataon'i orey Ogilvie sy Andrew Halliwell tamin'ny Desambra 2011. Inona ary aminao ny tetika sy teknika tsy hita tao? Norakofanay tsara tao amin'ny tetika folo tsara indrindra ho an'ny mpaka lahatsary mandritra ny fihetsiketsehana navoakan'ny WITNESS’ ny momba ny fifanarahana mialoha sy ny fitsitsiana ny bateria. Inona ary ireo teknika ampiasain'ny lahatsary mba hisintonana anao ho liana?
I Chris Rogy dia Fitaovana & tetika ao anatin'ny WITNESS. Mpianatra iray manomana ny Master izy na ny Maîtrise ka mifantoka kokoa amin'ny Social Media sy ny Social Change ao amin'ny New School. Ny tetikasany amin'izao fotoana dia tafiditra amin'ny fanadihadiana haino aman-jery vaovao izay antsoina hoe “Re-Fusing Refuge” momba ny famerenana an-tanindrazana ireo mpitsoa-ponenana Kambojiana-Amerikana ary ny thèse fandraisana anjarany amin'ny fikarohana izay mampandroso ny fomba fanaon'ny onjam-peo miaraka amin'ny mpitondra ny fiaraha-monina ambanivohitra any Kambodza.